AKHRI: Shan Qodob oo ay qasab tahay Inaad ka ogaato Mustaqbalka AlShabaab Kadib Geeridii Cali Dheere | afrikada news online
AKHRI: Shan Qodob oo ay qasab tahay Inaad ka ogaato Mustaqbalka AlShabaab Kadib Geeridii Cali Dheere
Warar Saacadihii lasoo dhaafay soo baxay ayaa sheegayay in la dilay Afhayeenkii Kooxda AlShabaab Cali Maxamuud Raagge (Cal Dheere)
RIIX HALKAN: DAAWO QAABKII LOO DILAY CALI DHEERE
Hadaba, DFS ayaanan ilaa haatan wax war ah kasoo saarin dilkan la sheegay in loo geystay afhayeenka Kooxda Shabaab Cali Dheere.
Si kastaba, Shabakaddan Wararka Baahin.com ayaa halkan idiinku soo gudbineysa Shan Qodob oo ay qasab tahay inaad ka ogaato Awooda Shabaab kadib dilka Cali Dheere
1- Cali Dheere Waxaa uu ahaa Dhiirageliyaha Shabaab: Kooxda Shabaab markii ay weeraro weyn geystaan Cali Dheere ayaa ka dhigi jiray mid ragii fuliyay Jano ku galayaan, sidaas darteed ayaa la aamisan yahay inuu ahaa dhiiragelliyaha weyn ee Shabaab.
2- Cali Dheere Waxaa uu ahaa Sargaal Amarada Bixin jiray: Warar xili hore loo helay ayaa sheegaya in Cali Dheere uu haystay guutooyin ciidamo ah oo isaga si gaar ah amarka ugu qaata, kuwaas oo haatan meel cidlo ah taagan kadib geeridiisa.
3- Cali Dheere Haduu Baxay Beeshiisana Shabaab Waa Uga Dhamaatay:Afhayeenkii kooxda Shabaab ayaa kasoo jeeda Beelaha Hawiye gaar ahaan Murusade, dad badan oo beeshaas kasoo jeeda ayaana aamisan in Cali Dheere uu dhalinyaro badan oo beeshaas kasoo jeeda ku qasbay iney Shabaab u dagaalamaan, laakiin hadii uu geeriyooday waxaa ay ka dhigan tahay in beeshaas ay ka harto Shabaab.
4- Geeridda Cali Dheere Waa Jabka AlShabaab: Kadib markii dhawaan la dilay Hogaamiyihii Shabaab Axmed Godane, Sidoo kalana la ogaaday in Mahad Karatay Duqeyn lagu dilay, hadana hadii uu Cali Dheere dhinto markaas Awooda Shabaab ayaa hoos udhaceysa maadaama ay taliskoodii sare waayeen.
5- Miyay Isdhiibi doonaan: Dhawaan Sh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo kooxdaas ka baxay ayaa laga saaray liiska dadka uu Mareykanku doonayo, arintaas ayaana fududeyn karta inuu dowladda Soomaaliya isku dhiibo, hadaba, Shabaab miyay qaadi doonaan Talaabo taas lamid ah si ay uga bad baadaan ugaarsiga lagu hayo.